Global Aawaj | सृष्टिलाई बचाउन परिवारको अनुरोध सृष्टिलाई बचाउन परिवारको अनुरोध
सृष्टिलाई बचाउन परिवारको अनुरोध
३० पुष २०७५ 3:54 pm
बुटवल । होज्किन्स लिम्फोमा नामक दुर्लभ क्यान्सरबाट विगत ७ वर्षदेखि पिडित सृष्टि शर्माको उपचारका लागि ठूलो रकम आवश्यक परेकाले घर परिवारले सहयोगको लागि अपिल गरेका छन् । उपचारमा धेरै रकम खर्च गरिसकेकोले उपचारका लागि आवश्यक थप रकम अभाव भइरहेको अवस्थामा सहयोगका लागि याचना गरिएको हो ।
सहयोग गर्न चाहनुहुने कुनैपनि संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुले सृष्टिका बुवा हरिहर शर्माको एनआईसी एसिया, मणिग्राममा रहेको बैंक खाता न. ब्५०२००३९५०२५२४०१ मा रकम पठाईदिन सक्नुहुन्छ । त्यस्तै हरिहरको मोबाईल न. ९८४६१०४१४४मा सम्र्पक गरी पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।